Ankoatra ny olana eo amin’ny enti-manana ara-bola, dia olana tsy ahafahana mampiroborobo ny orinasa malagasy ny tsy fahafahan’ireo tanora mpandraharaha mampivelatra ny tetikasany. Eo ihany koa ny tsy fanomezana laka ny fampiofanana arak’asa eto amintsika.
FANAFARANA ENTANA AVY ANY IVELANY
Sakana amin'ny fampiroboroboana ny fifandraisana amin'ireo tsena any ivelany ny tsy fahalalan'ny mpandraharaha malagasy ireo fenitra iraisam-pirenena, araka ny fanazavan’ny tompon’andraikitra avy amin’ny ministeran’ny indostria sy ny varotra ary ny asa-tanana omaly.
Vinavinaina ho iray lavitr’isa sy enin-jato tapitr’isa dolara amerikana ny teti-bola ho an’i Madagasikara taorian’ny fivoriana FAD 15 andian’ny fahatelo tamin’ity taona ity. Resy lahatra tanteraka mantsy ny BAD na ny banky afrikana momba ny fampandrosoana amin’ny politikam-pitantanana misy eto amintsika, izay azo lazaina fa liana sy maika amin’ny fandrosoana.